Olee otú ihichapụ ihe iPad App-adịgide adịgide
Anyị niile n'anya nbudata dị iche iche ngwa ọdịnala na anyị iPad ma na-agbalị ya. Otú ọ dị, ọtụtụ a ụfọdụ, o nwere otú eme na ị download ihe ngwa nanị mgbe e mesịrị na-ahụ na ọ bụghị ihe ihe ị na-achọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, i nwere ike tufuo nke ngwa n'ihi na ihe mere gị n'iyi ebe nchekwa maka ngwa ị ga-ọbụna na-eji. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke otú ka ihichapụ ngwa site iPad, anyị bụ ndị a aka.
Usoro nke ihichapụ ngwa ọdịnala bụ kama dị mfe ma na anyị ga-depụta nzọụkwụ n'ihi na ị na-aghọta ụzọ kacha mma site nke ị nwere ike ime otú ahụ.
Omenala ụzọ ka ihichapụ ngwa site iPad
1-pịa Iji hichapụ ihe niile ngwa site gị iPad na-adịgide adịgide
Hazie tupu arụnyere ngwa
Solution1: Omenala ụzọ ka ihichapụ ngwa site iPad
Iji ihichapụ ngwa ọdịnala na omenala n'ụzọ, ebe a bụ nzọụkwụ mkpa ka i soro.
Gaa n'ụlọ ihuenyo gị iPad.
Ị pụrụ ịhụ niile ngwa depụtara n'ebe ahụ.
Chọta ngwa ị chọrọ ka ihichapụ na enweta ya site na-ejide ya maka sekọnd ole na ole.
Ị ga-ahụ na ndị niile na akara ngosi na ihuenyo ga-amalite na-ama jijiji.
The ngwa ga-egosi a obere red akara ma ọ bụ a isi awọ cross n'elu akara ngosi.
Enweta na obe na ị ga-enweta a ozugbo arịọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ngwa.
Pịa 'Hichapụ' na ngwa ga-ehichapụ.
Ezie na nke a deletes ngwa si gị iPad, mgbe ị na mmekọrịta gị na ngwaọrụ gị PC, ngwa nwere ike weghachi dị ka ọ ka ga na-na gị iTunes. Iji kpamkpam ihichapụ ya, na-eso nzọụkwụ ndị a.
Mepee iTunes na PC na isi n'ọbá akwụkwọ.
Site dropdown menu, họrọ 'égwu'.
Ị ga-ahụ ndepụta nke ngwa ọdịnala na gị na ihuenyo.
Right pịa ngwa na ị chọrọ iji wepụ wee họrọ 'Hichapụ'.
The ngwa ga-akwụsị kpamkpam.
Ndị a bụ ndị dị mfe nzọụkwụ nke ga-ekwe ka ị ka ihichapụ ngwa si gị iPad.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka a nsogbu na ndị a niile hassles, ị nwere ike họrọ ihe ọzọ na-adị mfe ụzọ ihichapụ na ngwa ọdịnala. Wondershare SafeEraser bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na irè ụzọ n'ihi ihichapụ gị ngwa ọdịnala na-adịgide adịgide. Ị nwere ike pịa Download buttons n'okpuru ibudata free ikpe ka a na-agbalị.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị maara ihe a software na-eme, ebe a bụ ndepụta nke isi atụmatụ nke ọ nwere na-enye.
Kọwaa mmezi ohere na gị Apple ngwaọrụ site ịlụ Bibie na-achọghị ngwa.
Ị nwere ike ihichapụ kpam kpam data nke ana achi achi na hackers ga-enwe ike na-ezu ohi gị onwe ozi.
Ị pụrụ ọsọ ngwaọrụ gị site ịlụ Bibie junk faịlụ.
Ị nwere ike tufuo dị iche iche nke faịlụ gụnyere foto videos, Gburu, kalenda, ibe edokọbara, ozi na ndị ọzọ.
Ị nwere ike kpamkpam tọgharịa ngwaọrụ gị dị ka mma.
Mgbe ị na-achọ iji tufuo gị ngwa ọdịnala na enyemaka nke otu click, ebe a bụ isi nzọụkwụ ị ga-eso.
Wụnye Wondershare SafeEraser na PC na ẹkedori ya.
Ugbu a, gị iPad na jikọọ na ya na otu PC na enyemaka nke a eriri USB.
Ị ga-achọta iPad depụtara na isi window.
Na window nke ị ga-ahụ, pịa 'Hichapụ All Data' nke ga-ugbu na aka-ekpe-n'akụkụ.
Na ihuenyo nke na-abịa elu, i kwesịrị pịnye 'ihichapụ' na ederede igbe n'ihi na nkwenye nzube.
Pịa na 'Ihichapu Ugbu a'.
Chere ruo oge ụfọdụ ka software ga-akwụsị ihe data maka gị.
Pịa 'na-eme' na-mezue usoro.
Ezie na n'elu usoro bụ nnọọ irè n'ihi na ịlụ Bibie nke na-achọghị ngwa, mkpa ka ị mara na ọ gaghị ekwe omume ka ihichapụ ndị ngwa ọdịnala na-abịa preconfigured. Ha ga-abụ a akụkụ nke gị iPad ọbụna mgbe ị na ihichapụ ọzọ ngwa.
Otu nke kasị mma ụzọ aka ndị a ngwa ọdịnala bụ site na-ahazi ha na otu page.
Gị iPad ga nwere otutu ngwa dabeere na n'elu ọnụ ọgụgụ nke ngwa ị na-. Ị nwere ike ịkpọgharịa iji nke ndị a ngwa ọdịnala na i nwere ike na niile tupu arụnyere ngwa ọdịnala nke Ị dịghị mkpa na otu nke ndị na peeji nke na ị pụrụ leghara ha anya.
> Resource> iPad> Olee Iji kachapụ ọ bụla ngwa site na iPad-adịgide adịgide